आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १९ बुँदे सहमति – Health Post Nepal
२०७७ माघ ४ गते १८:१०
आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
आइतबार बसेको दुई पक्षीय छलफलमार्फत सहमति जुटेको हो।
मन्त्रालयलाई दबाब दिन विभिन्न स्वास्थ्य निकायका स्वास्थ्यकर्मी संगठनले संयुक्त रूपमा संघर्ष समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि महिनौंदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
दुई हप्ता पहिला स्वास्थ्यकर्मीसँग वार्ता गर्नका लागि मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
विभिन्न १९ बुँदामा मन्त्रालयसँग सहमति भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बताए।
‘आजको दुवै पक्षीय छलफलमा भएपश्चात १९ वटा बुँदामा सहमति जुटेको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यि बुँदाहरू लागू भएको खण्डमा साच्चै नै चिकित्सा क्षेत्रमा परिवर्तन आउने छ।’